Ny kinova vaovao amin'ny Linux Kernel 5.5 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
Rehefa afaka roa volana ny fampandrosoana, Linus Torvalds dia nanolotra ny kernel Linux kinova 5.5, kinova izay anisan'ireo fanovana malaza indrindra, afaka mahita azy isikany fahaizana manome anarana hafa amin'ny interface interface, ny fampidirana ny asan'ny cryptographic an'ny tranomboky Zinc, ny fahaizana fitaratra mihoatra ny kapila 2 ao amin'ny Btrfs RAID1, ny mekanika hanaraha-maso ny satan'ny patch mivantana, ny rafitry ny fitsapana unit kunit, ny fampitomboana ny mac80211 tsy misy tariby, ny fahazoana miditra amin'ny fisarahana faka amin'ny alàlan'ny protokol SMB sy maro hafa.
Ny kinova vaovao dia nandray patch patch an'ny 15505, haben'ny patch dia 44MB (fiovana nisy fiantraikany tamin'ny rakitra 11781, tsipika kaody 609208 nampiana, nesorina ny tsipika 292520). Manodidina ny 44% ny fanovana rehetra natolotry ny 5.5 dia mifandraika amin'ny mpamily fitaovana, manodidina ny 18% ny fanovana dia mifandraika amin'ny fanavaozana ny kaody manokana ho an'ny maritrano fampitaovana, 12% dia mifandray amin'ny tambajotram-pifandraisana, ny 4% amin'ny rafitra fisie ary 3 % ho an'ireo zanadrafitra kernel anatiny.
Ny zava-baovao ao amin'ny Linux Kernel 5.5
Ao amin'ity kinova vaovao amin'ny Linux Kernel 5.5 ity fanohanana ny xxhash64, blake2b, ary ny fanamarinana sha256 for ny rafitry ny rakitra Btrfs.
Amin'ny fampiharana ny RAID1, azo atao ny mamerina angona amin'ny telo (raid1v3) na efatra (raid1v4) fitaovana (ny fitaratra teo aloha dia voafetra tamin'ny fitaovana roa), mamela anao hitahiry angona nefa very fitaovana 2 na 3 miaraka amin'izay.
raha mbola Ext4 dia manome ny fahaizana mampiasa sakana kely kokoa ho an'ny encryption (Talohan'izay, ny encryption dia natao ho an'ny sakana izay mitovy habe amin'ny haben'ny pejy fahatsiarovana (4096)).
En F2FS dia mampihatra fomba fampirimana rakitra miaraka amin'ny fampifanarahana amin'ny sisin'ny 2 MB ho an'ny fametrahana amina sehatra marina tanteraka, miantoka ny tsy fisian'ny fizarana bebe kokoa an'ity rakitra ity avy amin'ny mpanangona fako.
Ny zava-baovao iray hafa dia ny nanampy fanampiana hanaraha-maso ny satan'ny Sela Mpandray Hafanana Mari-pahaizana NVMe fitaovana mampiasa ny hwmon API (mifanaraka amin'ny libsensor sy ny baiko "sensor"), izay tsy mitaky tombontsoa avo lenta hidirana (teo aloha, ny fampahalalana ny mari-pana dia hita taratra tao amin'ny "log smart", izay tsy hita afa-tsy amin'ny fakany).
Ho fanampin'izay, ao anatin'ny tetik'asa fampidirana lehibe an'ny WireGuardVPN, asa maro ao amin'ny tranomboky crypto an'ny Zinc nafindra tany amin'ny Crypto API fenitra, ao anatin'izany ny fampiharana haingana ny algorithms ChaCha20 sy Poly1305.
En ny hyperviser KVM x86 maritrano se manome ny fahafaha-manamboatra latabatra ambaratonga dimy misy akany pejy fahatsiarovana ary manampy fanampiana ho an'ny torolàlana XSAVES ho an'ny processeur AMD. Ho an'ny mpikirakira ARM64, nanampy ny fahaizana mandefa fampahalalana amin'ny fotoana.
también nanampy fanampiana ny fiasa hasina blake2b mankany amin'ny subsystem crypto, izay manome fahombiazan'ny hashing avo indrindra nefa mitazona ny fahamendrehana amin'ny sehatra SHA-3, ary koa ny kinova Blake2s fohy.
Fiovana lehibe iray hafa amin'ity kinova Linux Kernel 5.5 vaovao ity ny ny rafitra vaovao amin'ny fanomezana anarana hafa amin'ny interface interface, izay mamela anarana maro hampiasaina miaraka amin'ny interface (anisan'izany ny fampiasana modely udev marobe).
Ny haben'ny anarana dia mety hahatratra 128 litera (teo aloha dia voafetra ho 16 litera ny anaran'ny tambajotram-pifandraisana).
Raha hametahana anarana fanampiny dia ampiasao ny baiko «ip link prop manampy" (ohatra, "ip link prop manampy enx00e04c361e4c altname someothernamary "). Ny fampiharana dia mifototra amin'ny fametahana fananana fanampiny amin'ny interface ary azo hitarina amin'ny ho avy miaraka amin'ny masontsivana hafa, tsy voafetra amin'ny anarana hafa.
Ary farany, raha te hahalala bebe kokoa momba ny lisitr'ireo fanovana feno tafiditra ao amin'ity kinova Linux Kernel ity ianao dia azonao atao ny manatona azy Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Mikasika ny fisian'ny kinova vaovao, azonao atao ny misintona kaody hanangonana ny Kernel amin'ny tranokalan'ny ofisialiny na miandry ny fonosana voaangona hampidirina ao amin'ny trano fitahirizam-bokatrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ny kinova vaovao amin'ny Linux Kernel 5.5 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony
Casildo dia hoy izy:
SOA FALY mandray anjara amin'ity endrika vaovao ity ho ahy, ary maniry ny hahatonga ahy ho mora, hanomezana fahafinaretana ny zava-drehetra ao amin'ny LINUX.- Misaotra betsaka ... CASILDO MARIO PARSON.-
Mamaly an'i casildo